Masinina XCMG mpanamboatra & mpamatsy - Masinina China XCMG Factory
mpitrandraka haingana excavator
manatanjaka ny siny miasa eto an-tany ny excavator
siny sioka excavator
siny vato excavator
baoty mandoto tany
Siny kely sotro kely 40 sakany
XCMG excavator XE235C Ny endriny ankapobeny sy ny fizarana ny famaky ny axle dia mitombina kokoa hahatratrarana fitoniana mandehandeha tsara kokoa ary ny hafainganam-pandehan'ny dia lavitra dia mihoatra ny 40km / h hahitana ny hafainganam-pandehan'ny famindrana tranonkala haingana kokoa.
Kilasy moto XCMG
Ny mpitaingina moto XCMG dia mandray ny motera diesel turbocharged Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C180-II, izay manana herinaratra famokarana herinaratra sy hetra mahomby ary fanjifana solika ambany.
Roller amin'ny lalana XCMG
Minyan dia mitazona hatrany ny filôzôfia momba ny serivisy "Running on Faith, Keep Promise, Focus on Customer Concerns", mifantoka amin'ny zavatra ilain'ny mpanjifa, ary manome vokatra sy serivisy misy fahombiazana avo sy vidiny lafo.
Crane kamio XCMG
Teknika patanty valo no miantoka ny malama, ny fahombiazana avo lenta ary ny fitehirizana angovo an'ny rafitra fananganana, fihodinana ary famokarana.
Lozera kodiarana XCMG
Enta-mavesatra ho an'ny toe-batana; ny fitaovana miasa sy ny rindrina eo aloha sy aoriana dia misy tabilao matevina manana tanjaka lehibe, fizarana antonony ary fahafaha-mitondra matanjaka.